iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ဆိုတာ ဘာလဲ? (What is iMyanmarHouse.com?) | iMyanmarHouse.com
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ဆိုတာ ဘာလဲ?
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ဆိုတာ ဘာလဲ? (What is iMyanmarHouse.com?)
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ဆိုသည်မှာ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းချင်သူ၊ ဝယ်ချင်သူ၊ ငှါးချင်သူများကို ချိတ်ဆက်ပေးသော အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဝက်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ကို 21 October 2013 တွင် အင်တာနက်ပေါ် စတင်လွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ သင့်ထံတွင် အိမ်ခြံမြေ ရောင်းရန်၊ ငှါးရန် ရှိပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်၍ အခမဲ့ ကြော်ငြာတင်နိုင်ပါသည်။
January 2020 စာရင်းများအရ iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် အသုံးပြုသူများမှ တင်ထားပြီးသော ရောင်းရန် ငှါးရန် ကြော်ငြာစုစုပေါင်းမှာ ၃၅၀ ၀၀၀ (သုံးသိန်းခွဲ) ကျော် ရှိ်ပါသည်။ နိုင်ငံအဝှမ်း ထိုကြော်ငြာပေါင်းများစွာကို မြို့ နယ် အလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးအစားအလိုက်သော်လည်းကောင်း (တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးချင်း၊ မြေကွက် စသည်ဖြင့်)၊ ဈေးနှုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အဖွဲ့သူ အဖွဲ့သားများ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ပရိသတ်ကြီးမှ တခဲနက် အားပေးမှုကြောင့် အချိန်တိုတိုအတွင်း ဈေးကွက်၏ နံပါတ်တစ်နေရာ ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အိမ်ခြံမြေ လောကကြီးတစ်ခုလုံး ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ပြည်သူ့အကျိုးပြု အိမ်ခြံမြေ ဟောပြောပွဲများ၊ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲများကိုလည်း အစဉ်အမြဲ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။
အိမ်ခြံမြေ အရောင်းပြပွဲကို အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အိမ်ခြံမြေနှင့်ပတ်သတ်၍ သိကောင်းစရာ စာအုပ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။
အိမ်ခြံမြေ စာအုပ်များကို အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
May 2015 တွင် iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး လစဉ်ထုတ် အိမ်ခြံမြေမဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိလိုက်ပါသည်။ ထိုမဂ္ဂဇင်းကို အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အိမ်ခြံမြေ မဂ္ဂဇင်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
Andriod ဖုန်းများပေါ်တွင် သုံးစွဲနိုင်ရန် iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ Mobile အပ်ပလီကေးရှင်း ကို ၂၀၁၅ မတ်လတွင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ I-phone (iOS) ဖုန်းများပေါ်တွင် သုံးစွဲနိုင်ရန် အပ်ပလီကေးရှင်း ကိုတော့ ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်ပလီကေးရှင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com ၏ Mobile အပ်ပလီကေးရှင်း ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အမြဲတစေ ကဏ္ဍအသစ်များကို လွှင့်တင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုကဏ္ဍအသစ်များကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ကဏ္ဍအသစ်များကို ကြည့်ရှု့ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ